XEPLAYER - ỌZỌ ANDROID EMULATOR - N'IHI BEGINNERS - 2019
XePlayer - ọzọ Android emulator
Nhọrọ nke free emulator na-adị nnọọ ukwuu, ma ha niile yiri nnọọ n'ozuzu: na ọrụ nke ọrụ, na arụmọrụ, na na ndị ọzọ àgwà. Ma, na-ekpe ikpe site na ihe nyochaa "Ndị kasị mma Android emulator maka Windows", ụfọdụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ ka mma ma nwekwuo ike ụfọdụ nhọrọ, ụfọdụ ndị ọzọ. Ya mere, ọ bụrụ na ịnwetabeghị onwe gị ihe kwesịrị ekwesị, ị nwere ike ịnwale XePlayer, nke dị na nyocha a.
Dị ka ndị mmepe si kwuo, XePlayer na-arụ ọrụ na usoro amalite na Windows XP ma na-ejedebe na Windows 10 (VT-x ma ọ bụ AMD-v virtualization na BIOS achọrọ), usoro ihe omume ndị ọzọ dị ntakịrị karịa ndị ọzọ emenye, dịka ọmụmaatụ, naanị 1 GB zuru Ram. Ma, n'eziokwu, n'echiche dị iche iche, ọ na-agbagha. Ikekwe nke a kwesiri ikwu na uru nke ngwọta a. Ma ndị ọzọ bụ nkọwa zuru ezu.
Ịwụnye XePlayer ma na-agba ọsọ
Ebe ọrụ emulator emelite bụ xeplayer.com, mana egbula ọsọ gaa chọọ ebe ị ga-ebudata ya: eziokwu bụ na isi akwụkwọ na-enye onye ntinye weebụ (ya bụ, obere faịlụ nke na-ebu emulator n'onwe ya mgbe ọ kwusịrị ma na-atụ aro nke ngwanrọ na ibu ọrụ), nke ụfọdụ antiviruses kọchara ma gbanwee SmartScreen Windows 10.
Ọ bụrụ na ị gaa na saịtị http://www.xeplayer.com/xeplayer-android-emulator-for-pc-download/, a ga-enwe ihe dị ka atọ "Download" bọtịnụ - na elu n'okpuru foto ahụ, n'elu nri na n'okpuru ederede. Nke ikpeazụ (n'ọnọdụ ọ bụla, n'oge a ederede) na-enye gị ohere ibudata XePlayer dị ka onye nkwụnye ihe nkwụnye zuru oke, nke arụnyere n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Ọ bụ ezie na anaghị m ekwenye na ịdị ọcha zuru oke nke usoro ihe omume ahụ: dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na m nwere nsogbu ọ bụla na nwụnye, enwere m mgbagwoju anya, gbanyụọ antivirus gị. " O yiri ka ọ dị mma, ma enweghi ihe ọ bụla zuru ezu. Mgbe echichi, tọọ XePlayer ma chere oge: mbido mbụ ga-ewe ogologo oge karịa ka ọ dị na mbụ, dịka a na-arụnye ihe ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ịmalite ịchọta ihuenyo na-acha anụnụ anwu nke ọnwụ, na Windows 10 ma ọ bụ 8.1 arụnyere na kọmputa gị, mgbe ahụ ọ ga-abụrịrị ihe arụnye Hyper-V components. Enwere ike iwepu ha, ma ọ bụ ị nwere ike iwepụ ya na nwa oge. Iji mee nke a, gbakwunye iwu ozugbo dị ka onye nchịkwa ma jiri iwu: bcdedit / set hypervisorlaunchtype off
Mgbe emebisịrị iwu ahụ, jide n'aka na ịmalitegharịa kọmputa ahụ, emulator kwesịrị ịmalite n'enweghị njehie. N'ọdịnihu, iji nyeghachi Hyper-V, jiri otu iwu ahụ na igodo "na" kama "gbanyụọ".
Jiri Emulator XePlayer Emmanuel
Ọ bụrụ na ị jirila ọrụ ndị ọzọ iji na-agba ọsọ gam akporo na Windows, interface ahụ ga-ama gị nke ọma: windo ahụ, otu panel ahụ na omume ndị dị mkpa. Ọ bụrụ na nke ọ bụla n'ime akara ngosi enweghị ike ịghọta gị, jigide ma jide mainter pouse na ya: a na-asụgharị XePlayer interface n'asụsụ Russian nke ọma ma ghara inwe nsogbu.
M na-atụ aro ka ị leba anya na ntọala (akara ngosi akara na nri na aha mmanya), n'ebe ahụ ị nwere ike ịhazi:
Na taabụ "Basic," ị nwere ike iji gbanye mgbọrọgwụ, gbanwee asụsụ ahụ, ma ọ bụrụ na agbanyereghị Russia na akpaghị aka.
Na Di elu taabụ, ị nwere ike ịhazigharị akụkụ nke RAM, cores processor na arụmọrụ na emulator. Na n'ozuzu, ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ntọala ndabara, ọ bụ ezie na otu n'ime isi ihe kpatara nke a abụghị ụdị ọhụrụ nke gam akporo (4.4.2).
Na akpatre, lee "Labels" taabụ. E nwere ụzọ mkpirisi maka ịchịkwa emulator: maka ụfọdụ omume, ọ ga-adịrị mma iji ha mee ihe karịa otu òké.
Na emulator enwere Ụlọ Ahịa egwu maka nbudata egwuregwu. Ọ bụrụ na ịnweghị ike itinye akaụntụ Google gị n'ime emulator, ịnwere ike ibudata APK site na saịtị ndị ọzọ wee wụnye ha site na iji bọtịnụ APK na ihe ntụpọ ma ọ bụ nanị ịdọrọ faịlụ na windo emulator. Ihe ka ọtụtụ n'ime "ngwa" etinye na emulator bụ ihe na-abaghị uru ma na-eduga na ngalaba nke onye nrụpụta ọrụ onye ọrụ.
Maka egwuregwu, ọ ga-adịrị mfe ịtọ ebe dị ọkụ na ihuenyo ma chịkwaa ha na keyboard. Ọzọ, ịchọpụta ihe omume nke ọ bụla na-enye gị ohere ịhazi, jiri akara ngosi nke na-egosi mgbe ị na-ejide ya na pointer.
Ihe ọzọ enwere ike ịpụta uru, ma ọ bụrụ na ọ bụ emulator na usoro ihe dị ala: ma ọ bụrụ na analogs iji tinye ọsọ ọsọ na Russian site na keyboard, ị ghaghị ịhazi ntọala ma chọọ ụzọ, ihe niile na-agbanwe, Mgbe ị na-etinye, ị họọrọ asụsụ Russian: interface nke emulator na gam akporo n'onwe ya bụ "n'ime," yana ntinye na keyboard ngwa - niile na Russian.
N'ihi ya: Enwere m ike ịkwado ngwọta maka ịkwalite gam akporo na PC na laptọọpụ dịka ọ na-arụpụta ma dị mfe maka onye na-asụ Russian, mana enweghị m obi ike na nchekwa XePlayer zuru ezu.